Famokarana jamba amin'ny tehina | Asa tanana
Marian monleon | | asa-tanana
Ny jamba dia safidy tsara indrindra amin'ny ambain. Tena azo ampiharina amin'ny varavarankely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, lakozia na efitrano fandraisam-bahiny izy ireo ary atambatra tanteraka amin'ny rugs sy cushions. Androany aho dia tonga niaraka tamin'ny tolo-kevitra iray momba ataovy amin'ny tsorakazo ny masonao ary omeo fanovana ny efitranon'ny ankizy.
Ho an'ity dia mila kititra ianao hametahana jamba ny habeny mety amin'ny varavarankely sy lamba tsara tarehy sy tanora.
Velcro. (ny ampahany malefaka ihany).
Bias (apetraka ny tsorakazo ary ampitao ny kasety).
Kit na mekanisma jamba tanteraka.
Marker ho an'ny lamba.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia refesina ny varavarankely ary mampifanaraka ny refin'ny Tela ho an'ny jamba. Ary mividiana ny mekanisma. Raha ny amiko dia nanararaotra ny iray izay efa nananako aho.
Araka ny tadiavintsika dia tsy maintsy manampy lamba manodidina ny 4 sm eo ho eo isika, amin'ny lafiny roa, ho an'ny hems.
Omano ny sisin'ny faran'ny jamba, ho 1 sm ny sakany noho ny bar.
Mba tsy hisy olana rehefa ampidirina ny counterweight ary esorina, ho an'ny fanasana na fanosehana. Makà refy ary asio marika miaraka amin'ilay marika.
Nasiana pinned sy basted raha heverinao fa ilaina izany. (Nampitaiko mivantana tamin'ny masinina io).
Tadidio ny avela tsy voahitsaka ny folo santimetatra eo ho eo izay ho eo no hampahafantarantsika ny tehina mpanohitra.
Mamakivaky ny masinina amin'ny backstitch izy io.
Raiso ny refy hametrahana ny fitongilanana amin'ny jamba, Mba hanaovana izany dia zarao amin'ny fizarana mitovy ny lamba. Raha ny amiko dia manodidina ny valo santimetatra eo ho eo izy ireo.
Arosoy ary alalino ilay milina fanjairana. Aza adino ny miala eo amin'ny folo santimetatra eo ho eo mba hahafahana mampiditra ny tsorakazo avy eo.
Avy eo amboary moron-tongony tsotra ho an'ny tapany ambony, izay alehan'ny velcro, (malefaka). Ny sisiny koa.
Hanjaitra ny peratra amin'ny counterweight amin'ny tanana izahay manamboatra ny tadiny.
Ambony ref mifandanja.
Ampidiro izao ny tehina mpanohitra amin'ny alàlan'ny lavaka ambany.
Manaraka ny sisa tehina.
Apetraho ny jamba amin'ny alàlan'ny fametahana ny velcro eo an-tampony.
Ampandalovina amin'ny tadin'ny tsorakazo ny tadiny ary fatorana amin'ny peratra an'ny counterweight.
Ary vonona! mety amin'ny fanaingoana ny efitranon'ny ankizy amiko, ary any amin'ny anao? Raha mahasahy manao jamba anao manokana ianao dia tiako ny mahita azy na aiza na aiza ao amin'ny tambajotra sosialiko. Manentana anao aho hanao an'io, mahagaga ny fiovana ary mahavariana ny valiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Manao jamba amin'ny tsorakazo
Karatra Krismasy tena mora atao amin'ny ankizy
Asa tanana krismasy. Santa Claus reindeer vita amin'ny eva fingotra